Vamwe vatsigiri veZanu PF kuManicaland vanoti havazi kufara nedanho riri kuda kutorwa rekuita kongiresi yechimbi chimbi iyo vanoti yakanangana nekusimudzirwa kwemudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Grace Mugabe, kuti vaitwe mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weZanu PF.
Mashoko aya anotevera chisungo chakaitwa nedunhu reZanu PF mukupera kwesvondo.
Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti Amai Mugabe havana kukodzera kuti vapihwe chinzvimbo chekuva mutevedzeri wemutungamiri webato, izvo zvinozoita kuti vaitwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Mumwe wevanhu ava, avo vanopikisa kukwiridzirwa kwaAmai Mugabe, ndiVaRueben Bote avo vanoti nyaya yekusarudza mudzimai kuti ave muPresidium haina kushata asi chakaipa inyaya yekuisa vanhu pazvinzvimbo zvisina kubva muvanhu.
Imwe nhengo yeZanu PF, uye vaimbove murwiri wehondo yerusununguko, VaIrwin Mbengo, vanoti zviri kuda kuitwa zviri kunze kwemutemo uye zvinofanirwa kurambwa zvachose.
Vanoti bumbiro remitemo yeZanu PF harifanirwi kungoshandurwa chero nguva apo vamwe vanhu vanenge vaine zvavanoda kuzadzikisa kana kubvisa vamwe pazvigaro.
Bumbiro reZanu PF rakashandurwa zvakare muna 2005 kuitira kuti mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato ange ari munhukadzi, izvo zvakapa kuti Amai Joice Mujuru vatore chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZanu PF.
Bumbiro iri rakashandurwa zvakare muna 2014 rikapa masimba mutungamiri webato kuti asarudze vatevedzeri vake, kwete kuti vasarudzwe nevanhu pakongiresi.
Izvi zvakapa kuti Amai Mujuru vabviswe mushure mekupomerwa mhosva yekuda kubvisa VaMugabe pachigaro.
Mumwe mutsigiri weZanu PF kuManicaland, VaProsper Tendengu, vanoti vanoona hurongwa hwekuda kusimudzira Amai Mugabe huri hwekuda kufadza rimwe boka rinozivikanwa nekuti G40 iro vanonzi vanotsigira.
VaTendengu vanoti kongiresi iyi vanoiona senzira yekuda kudzinga vamwe mubato iri vavasingawirirani naAmai Mugabe.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemunyori weZanu PF mudunhu reManicaland, VaKenneth Saruchera, pamusoro penyaya iyi kunyange hazvo pamusangano weSvondo vakatsigira pfungwa yekusimudzira Amai Mugabe.
Chikwata cheG40 chiri kukikiritsana nechimwe chinozivikanwa nekuti Lacoste icho chinonzi chinoda kuti mumwe wevatevedzeri vaVaMugabe, VaEmmerson Mnangagwa, vaende panyanga kana VaMugabe vachinge vazosiya chigaro.
Grace For VP